Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve1- (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
SKU: 651057-01-1 Category: Mamwe makemikari
Synonyms · 1-Methanesulfonylpiperidin-4-amine hydrochloride
IUPAC zita 1-Methylsulfonylpiperidin-4-amine; hydrochloride
Kemikari zita 1- (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride
Boiling Point (˚C) 328.3
2 anodzokorora nokuti 1-(Methylsulfonyl)piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1)
Tinogadzira uye tinogadzira zvakawanda zve1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1), pakati pemamwe makemikari. PaApicmo, zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemitemo yekutengesa CGMP.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine Hydrochloride (651057-01-1) Tsanangudzo.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) iri muchikamu chakafanana ne boric acid, piperazines, fluorochemicals, pyrimidines, nezvimwe zvivako zvakavakwa.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Chimiro uye Zvimwe Zvisikwa
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride inouya yakasimba uye fomu yeupfu.
Covalent 2 unit
Hydrogen bond Mupiro - 2 unit
Acceptors - 4 diyuniti
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Computed Properties
Topological polar surface area 71.8 A ^ 2
Misa chaiye (g / mol) 214.054
Iyo ikemikisi inobatsira zvikuru yekutsvakurudza nekuvandudzwa kwezvinodhaka.
Njodzi dzinosangana ne1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride.
Kutarisana necheganda, kunogona kukonzera maitiro akadai, kushatirwa, kuora, kuora, kana kuburitswa.
Kana kusangana nemaziso kunogona kukonzera kushungurudzika kweziso zvakanyanya, izvo zvinogona kukonzera kuparara kusingaperi.
Dhiyabhorosi kana inwa
Kana yakanyungudutswa inogona kukonzera kushungurudzika kwekupemha.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride Kuchengetedza
Nguva dzose dzipfeke zvizere zvekudzivirira kuti uone kuti muviri wako unodzivirirwa kubva kune chero upi zvake unosangana nechigadzirwa ichi. Izvi zvinofanira kusanganisira; kuchenesa mweya-hewa pamwe nechiso chemasikati kuitira kuti uone kuti hauna kuisa mhepo kana mafungu. Yeuka kushandisa makemikari asingadziviriri magasi nemaoko ako uye zvisina kuvharidzirwa mabhoti kuti ufukidze tsoka dzako.
2. 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Engineering Controls
Nzvimbo yekushanda inofanira kunge yakave yakagadzirirwa nemichina yekuchenesa mweya, chekuchengetedzwa kwekuchengetedza, mashizha, makemikari anokonzera mhepo, kupisa mweya, uye makabati.
Shamba nzvimbo yakakanganiswa nemvura yakawanda yemvura uye sese yakanyarara kwemaawa anenge 15. Kana kusuruvara, kutsamwa, kana kubwinya zvinopfuurira, tsvaka kurapwa kubva kune chiremba kana chiremba.
Kana iwe uine lensisi uye iwe unogona kuvabvisa nyore nyore, ita saizvozvo. Bvisa maziso ako nokungwarira nemvura yakawanda yemvura kune anenge 10-15 maminitsi. Kana kutsamwa kunopfuurira, tsvaka rubatsiro rwekuchirapa kana kutarisirwa.
Endesa munhu akabatwa kune nzvimbo yakazaruka nemhepo yakakwana yakakwana. Kana kufema kunetseka, kune ruzivo, kutungamirira sorosi yekogi uye nokukurumidza kutsvaga kurapwa
Kana wakagadzirwa, usamanikidza kurutsa. Shamba muromo wako uye unwe mvura yakawanda, inenge hafu yeita. Kana zviratidzo zvichiripo, dana nheyo yehupfu kana kutsvaga kurapwa kwechiremba kubva kune chiremba kana chiremba.
4. Nzira yekushandisa 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Yakachengeteka
Kana chigadzirwa chacho chiri kushandiswa, chimbofunga zviyero zvinotevera:
Kupfekedza zvizere zvekudzivirira kuti uvhare muviri wako wose.
Usafema chero kusvibiswa kwakaita seguruva, mhepo, kana futi.
Nguva dzose inoshanda mune imwe nzvimbo yemakemikari inopisa nzvimbo
Iva nechokwadi kuti pane kuputika kwakakwana muimba
Iva nechokwadi chekuti iwe une hurongwa hwekukurumidzira zvakadai sekuona eyewash uye kuchengeteka.
5. 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Mushure mekushandisa kuchengetedza zvidzidzo
Mushure mekushandisa 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride, nyora zvinotevera:
Dzorerai chigadzirwa kumapato ayo epakutanga
Iva nechokwadi chokuti mudziyo wakanyatsovharwa.
Ramba rakachengetwa kure nekusatenderwa kusvika.
Geza kuti urege kuchenesa bhenji rinoshanda uye kubvisa kupera
Bvisa mbatya dzose dzakasvibiswa uye uzvisuke zvakakwana usati watoshandisa zvakare
Geza maoko ako mumvura yakawanda yemvura uchishandisa sipo yakanyatsonaka yekuchenesa
Usambobvumira chero kusvibiswa kunoputika mumvura mvura
Bvisa kutyiswa, midziyo isina chinhu, kana zvigadziro zvinoteerera nemitemo yemunharaunda.
6. Mushure mekunge Uzadzise kushandisa
Kana isiri kushandiswa, iva nechokwadi chekutora matanho anotevera:
Chengetedza iri pachitonho chekupedzisira.
Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yekuchengetera inokwana ventiro yakakwana.
Nguva dzose uchengetedze munzvimbo inotonhorera uye yakaoma
Chengetedza zvakasimba munzvimbo yakavharidzirwa kunze kwekusabvumirwa kusina mvumo
7. 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Kuchengeta nekubata
Ichengetedze kure nevashandi vasingabvumirwi
Ivhare iyo muvhara rakavharwa
Dzivisa kuonekwa kune dzimwe hupisi, makemikari, unyoro, kana chero ani-oxidzing agents
Iva nechokwadi chokuti iwe unoshanda munzvimbo yakazaruka kana mukana wakanaka
Kupfekedza zvizere zvekudzivirira kuti udzikise kuputika kwemhepo, kana kuwana chero kusangana kwekemikisi neganda kana ziso
Iva nechokwadi chokuti iwe nguva dzose unoshandisa chigadzirwa ichi muimba yefume
8. 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Mikana Dzakanganisa
Nguva dzose dzipfeke zvipfeko zvinodzivirira kana uchidzima moto. Shandisa doro, yakaoma makemikari powder, carbon dioxide, kana polymer mutezo.
Scoop the chemical and release it in a container. Dzinga maererano maererano nemitemo yemunharaunda uye yepasi. Geza nzvimbo yacho zvakanaka uye uchengetedze zvakanaka. Usambobvumira zvakasara kuti zviyerere mumigwagwa yenguva dzose yemvura kana mvura.
9. 651057-01-1 Sensitivity uye Reactivity
1 (Methylsulfonyl) piperidine-4-amine hydrochloride inofanirwa kuve yakasvikidzirwa kumadziririro akakwirira, yakasimba ye-oxyidizing agents, heat, asidi uye zvigadziko. Iyo yakakonzera kuparara zvinhu zvinokonzerwa ne nitrogen oxides, carbon monoxide, uye hydrogen chloride, nitrogen oxides.
10. 1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride Kushandiswa Kwemakemikari
Dzinga chigadzirwa ichi senzvimbo yakasvibiswa uye inoteerera mitemo yemunharaunda, yehurumende uye yehurumende. Zvakanaka, iwe unogona kusarudza kuisunganidza pamwe nesimbi inopisa uye inopisa kushandisa kemikisi incinerator iyo yakagadzirirwa zvinopisa uye shrubber.
11. 651057-01-1 Kutumira Mashoko
Chigadzirwa chacho chakachengeteka kune zvose pasi uye kufamba kwepamhepo.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride Regulatory Information
Kuburitsa, uye chikumbaridzo, uye huwandu hwe1 (Methylsulfonyl) piperidine inotevera zvinodiwa neSARA Title III, zvikamu 302 uye 313. Kuteerera kero yako yekufambisa kwekwako kana uchibata chigadzirwa ichi.
1 (Methysulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Shanduro yeKambani:
Bato redu rine masayendisiti ane ruzivo anonyanya kunakidza munzvimbo dzose dze chromatography, makemikari, mararamiro uye sayenzi yezvinhu, kuongorora kutsvakurudza, nezvimwewo.
1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride (651057-01-1) Kurayira Kukuru & Kutengo
Kana iwe uchida zvakakura zve1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride nokuda kwekutsvakurudza kwako, kukurudzirwa, kana kubatanidza, ingoisa mutemo wako uye tichadzoka kwauri.
John A. Joule, Keith Mills, Heterocyclic Chemistry, Peji 5-10.
Pharmaceutical Products and Chemical Intermediates, 4th Review: peji 7
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library yeMishonga, Pubchem,1 (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride, Zvikamu 1-12.
Iyo yakanakisisa 1- (Methylsulfonyl) piperidin-4-amine hydrochloride nebasa randakave narina, Nice experience